धेरै राम्रो र हार्दिक सलाद "आर्किड"
यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने हार्दिक सलाद, त तपाईं पक्कै पनि प्रयास गर्नुपर्छ सलाद "आर्किड"। यो धेरै असामान्य र कोमल देखिन्छ, तर आफैमा यो एकदम भारी र क्यालोरी छ। एक ठूलो भोजको लागि आदर्श, तर गुमेको वजन महिलाहरु यो यो मूल्य सुझाव दिन्छौं।
को सलाद लागि पसलमा भ्रमण र निम्न उत्पादनहरु किन्न आवश्यक:
- नुनीन वा मसालेदार मशरूम;
- fillers र flavorings बिना आलु चिप्स;
- कोरियाली एक गाजर;
- हार्ड पनीर;
एक सानो बचत गर्न, मशरूम स्वतन्त्र संकलित सकिन्छ प्रतिस्थापित र दूध मशरूम नुनीन र boletus। यो सलाद अतिरिक्त स्वाद र स्वाद दिन हुनेछ। उच्च गुणस्तरीय छम किन्न। यो आवश्यक छैन यो सलाद को सम्पूर्ण स्वाद बिगार्न सक्छ, यो संघटक को सस्ता संस्करण खरीद छ। एउटै अन्डा र पनीर बारेमा भने गर्न सकिन्छ। मा साधारण सलाद तयारी सबैलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर स्वाद, सबै सामाग्री को संयोजन देखि निर्माण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, राम्रो, पनीर पनीर प्रजातिहरू छ भने, तपाईंले पनि Maasdam वा अन्य कठिन पनीर एक धनी स्वाद संग लाग्न सक्छ।
यो तयार सलाद धेरै सरल छ। अण्डा खाना पकाउन र तिनीहरूलाई प्रोटिन देखि पहेंलो भाग विभाजन गर्न। यो पहेंलो भाग पनि सजावट जानेछन्, र प्रोटिन स्ट्रिप्स मा कटौती गर्न आवश्यक छ। यो फारम सबै सामाग्री काटन गर्दा अनुगमन गर्न आवश्यक हुनेछ। बस मशरूम र छम crumble। मशरूम सानो हो भने, तपाईंले तिनीहरूलाई सम्पूर्ण छोड्न सक्नुहुन्छ। पनीर अंगीठी आवश्यक र आलु चिप्स हात द्वारा crumbled। सलाद "आर्किड" स्ट्याक तहहरू, त्यसैले निम्न क्रम: गाजर, मशरूम, चिप्स, छम, पनीर, र अन्डा पछि छ। एक सानो मेयोनेज संग प्रत्येक तह कोट, तर कम भन्दा बढी राम्रो छ। तपाईं एउटा सानो स्लाइड एक सलाद बाहिर राख्नु आवश्यक छ।
सलाद नुस्खा फोटो संग "आर्किड" तपाईं यस लेखमा पाउनुहुनेछ, तर पनि यो डिजाइन बिना यो धेरै सजिलो छ। त्यसैले, हामी beautification गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यो लगभग निर्णायक भूमिका खेलेका छ। यो चिप्स - सलाद "आर्किड" छोड्दा जो एउटै नाम को एक फूल जस्तै सजाया छ। Sam सलाद crumbled अन्डा yolks संग छर्कियो र चिप्स माथि फूल राखे। तपाईं एक फूल को बीचमा संकेत गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो जैतून वा जामुन रातो currant संग गर्न सकिन्छ।
विषय अर्को विभिन्नता
सलाद "आर्किड" तपाईं व्यक्तिगत अंश लागि सबै सामाग्री बाहिर राख्नु गर्दा, ककटेल संस्करणमा राम्रो हेर्न, र शीर्ष प्रत्येक सेवा आलु चिप्स एक फूल सजाउनु। तपाईं यति धेरै पाहुनाहरूलाई छैन भने, तिनीहरूलाई प्रत्येक एक फूल प्राप्त गर्न राम्रो हुनेछ। यो मूल र उत्सव देखिन्छ। साथै, तपाईं सलाद स्लाइस चुकंदर चिप्स सजाउनु, र ठाउँ गाजर को एक टुक्रा बीचमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बस अन्डा माथि छल्ले राख्न सक्नुहुन्छ। बरु, मसालेदार मशरूम तपाईं साधारण मशरूम लाग्न सक्छ पूर्व-तलना तिनीहरूलाई। तर चिप्स चाँडै नरम छैन गेष्ट को आगमन अघि राम्रो सलाद संकलन गर्न भनेर नबिर्स। साथै, यो पत्र राम्रो मेयोनेज बिना छोड्न छ।
धेरै राम्रो विकल्प उत्सव व्यञ्जन - सलाद चिप्स संग "आर्किड"। त्यसैले आफ्नो भोजन छैन मात्र स्वादिष्ट, तर पनि सुन्दर!
सलाद पात को नुस्खा सलाद। सरल र मौलिक व्यञ्जनहरु
छुट्टी तालिका मा सजिलै र चाँडै तरकारी सलाद। नयाँ वर्ष र बाहिर लागि व्यञ्जनहरु।
को जाडो लागि माछा संग सलाद: व्यञ्जनहरु
केकडा लाठी संग स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु सलाद
एक मैनीक्योर तालिका कसरी चयन गर्न: सुझाव र फोटो। आकार मैनीक्योर तालिका
सबै भन्दा राम्रो निर्माताहरु देखि वाहन के हुन्
एक काठ विवाह भएकोमा बधाई। विवाहको5वर्ष को लागि के दिन?
रूसी आवाज अभिनय संग चिनियाँ धारावाहिक: नाम, उत्कृष्ट सूची
कुस्ती: मा दिन होटल र अपार्टमेन्ट
कुरा? वा कसरी कुरा गर्न एक सुगा सिकाउन
सोडियम बिकारबोनिट र प्रयोग को स्कोप
Filippa Yankovskogo पत्नी ओक्साना Fandera। जीवनी अभिनय परिवार
निराशा - idealizing लागि भुक्तानी
मस्को समूह "एली स्मिथ"
कति सुन्दर चुल्ठो कपाल? पुनरावेदन को रहस्य